Haddii aad carruur leeyahay oo aad naafo tahay (Om du har barn och har funktionsnedsättning)
Befintlig sida: Haddii aad carruur leeyahay oo aad naafo...
Haddii aad carruur leedahay way wanaagsan tahay inaad kala hadasho ilmahaaga naafanimadaada. Waxay kaa caawin kartaa inaad is fahantaan oo ay nolol maalmeedka kuu fududeeyaan. Qoraalku wuxuu ku qoran yahay luqad fudud (lättläst).
Waalidiinta iyo dadka waaweyn waxay u baahan yihiin inay dhegaystaan ​​su'aalaha iyo fikradaha carruurta. Way fiican tahay inaad kala hadasho ilmahaaga naafanimadaada.
Waxaad ka hadli kartaa xaalado kala duwan oo naafanimadu ay saamayso qoyskaaga. Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa in la sharraxo waxa dhacaya haddii aad isterees noqoto. Ilmuhu wuxuu u baahan yahay inuu fahmo si uu ugu sharaxo asxaabtiisa iyo dadka kaleba.
Maxay qaban karaan baxnaanintu?
Baxnaanintu waxay kaa caawin karaan inaad kala hadasho ilmahaaga naafanimadaada. Adiga ayaanu kula hadli karnaa, ilmahaaga ayaanu la hadli karnaa, si wadajir ah ayaanu idiinla hadli karnaa. Waxay ku xirantahay sidaad adigu rabto iyo da'da uu ilmahaagu jiro.
Haddii aad u baahan tahay taageero dheeraad ah oo ka baxsan baxnaaninta, waanu kaa caawin doonaa inaad hesho meesha saxda ah. Waxay noqon kartaa tusaale ahaan, dhakhtarka dhimirka ee carruurta- iyo dhalinyarada (BUP) ama xarun caafimaad.
Sharcigu muxuu ka qabaa?
Sharciga daryeelka caafimaadka- iyo jirradu waxa uu dhigayaa in carruurtu xaq u leeyihiin inay helaan macluumaad iyo taageero. Qof kasta oo ka shaqeeya daryeelka caafimaadka waa inuu awood u yeeshaa sidii u siin lahaa carruurta taas.
Heshiiska xuquuqda carruurtu waxa uu dhigayaa in dhammaan carruurtu ay xaq u leeyihiin inay sheegaan waxa ay qabaan marka ay timaado wax iyaga saameeya.
Hadaanu nahay dadka ka shaqeeya daryeelka caafimaadka si aanu awood ugu yeelano inaan caawinno carruurta, waxaanu waydiinaynaa dhammaan bukaan jiifka (patienter) haddii ay la nool yihiin caruur ka yar 18 sano. Waxay noqon karaan carruur ay iyagu dhaleen, carruur uu qof kale dhalay ama qaar ay walaalo yihiin.
Haddii aad su'aalo qabto
Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan carruurta, waxaad la hadli kartaa qof jooga qaybta qaabbilaada ee aad la xiriirtay. Waxaad sidoo kale waydiisan kartaa inaad la hadasho wakiilka carruurta. Qayb kasta oo wax lagu qaabbilo oo loogu talagalay dadka waaweyn waxa jooga wakiil carruureed.